Ministeran’ny Harena anaty rano sy ny Jono: …tsy laharam-pahamehana ny fampidirana mpiasa ho lasa mpiasam-panjakana… | Région Boeny
Tao anatin’ny lanonana fifampiarahabana ny fahatratrarana ny taona 2015 notanterahin’ny Foibem-paritry ny Ministeran’ny Harena anaty rano sy ny Jono eto Boeny, tao amin’ny trano fisakafoanana Zahamotel La Corniche Mahajanga, ny 27 febroary 2015 no nanaovan’ny Ministra tompon’andraikitra loa-bary an-dasy ho an’ireo mpiara-miasa rehetra miankina na tsy miankina mivantana amin’ny departemantany aty amin’ny Faritra Boeny.
Anisan’ny nasongadin’Atoa Ministra nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony fa “teknisiana izy fa tsy mpanao politika mpangalatra volam-panjakana” ary noho ny fanohanany ny Filohan’ny Repoblikan’ny Madagasikara, Atoa Hery Rajaonarimampianina, no mahatonga azy manampy ny mpiara-belona sy ireo mpanagom-bokatra. Nohamafisiny ary fa vonona hiasa amin’ny ara-dàlana ny tenany fa tsy handany ny Harena anaty rano amin’ny tsy rariny.
Noho izany, notsipihan’ny Ministra fa ny fampandrosoana ny Ministera, ny fanatsarana ny fari-piainan’ireo mpanjono ary ny fampiroboroboana ny kalitao sy ny isan’ireo Harena anaty rano no tanjona kendreny aloha. Nohazavainy hatrany fa izay rahateo no nandraisany fanapahan-kevitra hanao fambolena honko ny 07 Martsa 2015 aty Mahajanga miaraka amin’ny Kaominina sy ireo fikambanana maro samy hafa.
“…Fa tsy ny fampidirana ny mpiasa ho lasa mpiasam-panjakana akory aloha no mahamaika” hoy kosa izy tamin’ireo mpiasa, ho valin’ny fangatahan’ireto farany izay nisy efa nahavita hatrany amin’ny roapolo taona teo anivon’ity ministera ity nefa dia mbola tsy mpiasa raikitra hatramin’izao. Nahatsiaro ho diso fanantenana sy toa ginagina tokoa ireo mpiasa nanatrika ny lanonana nanoloana izany valin-kafatra izany, saingy nambaran’izy ireo fa tsy kivy izy ireo ary mbola miandrandra ny fitsinjovana izany maha-olona azy ireo izany hatrany.
Ankilan’izay, dia nasian’ny Ministra resaka ihany koa ny mikasika ny fiaraha-miasan’ny Ministeran’ny Harena anaty rano sy ny Jono amin’ireo sehatra tsy miankina, nohamafisiny fa “mila fanaraha-maso misimisy kokoa ny fiompiana ireny hazandranomasina ireny, ary tsy azo hivalozana ny fepetra ho raisina ho an’ireo mpandika lalàna”.
Nisolo-tena ny Lehiben’ny Faritra Boeny, nanome voninahitra io lanonana fifampiarahabana io ny Lehiben’ny Kabinetran’ny Faritra, Atoa Hemedy sy ireo mpiara-dia aminy.